I-Movea yenza ukuthengiswa kwe-plug-in ye-hybrid iimoto zenyuka nge-300% | Iindaba zeGajethi
I-Movea yenza ukuthengiswa kwe-plug-in ye-hybrid cars skyrocket 300%
Ezinye iindlela ziyafumaneka xa kuziwa kwiimoto ezixhaswe ngamanye amandla. Zombini iimodeli zombane ezigcweleyo kunye ne-hybrid (injini yombane + ipetroli-inikwe amandla injini) ziyavela kwiikhathalogu zenkampani. Ngokunjalo, ngoJulayi ophelileyo iSicwangciso seMovea samiselwa. Kuyinkuthazo kwiintsapho ukuba zifumane imoto yezi meko. Esi sikhuthazo sinokufikelela kwi-5.500 ye-euro yembuyekezo eya kuthi iqokelele namanye amaphulo.
Esi sicwangciso seMovea sagxekwa ngenxa yolawulo lwaso kunye nendlela oluye lwaphela ngayo uncedo: kwiiyure nje ezingama-24 uncedo lwalusele luphelile. Kwaye sithetha ngoncedo kuzo zombini iimoto zabakhweli kunye nezithuthuthu kunye neeveni zombane. Kodwa lo ngomnye umcimbi ngokupheleleyo. Eyona nto itsale umdla yimpembelelo eyomeleleyo yokuba olu ncedo luye lwathetha ukuthengwa kwezi zithuthi. Ubuncinci kule nyanga ka-Agasti, njengoko bekuxeliwe I-Europa Press.
Ngokwedatha ebonelelwe yiarhente, kwezi nyanga besikulo nyaka we-2017, iiyunithi ezingama-2.091 zeemoto zombane ezicocekileyo kunye ne-plug-in yeemoto ezihlanganisiweyo zithengisiwe eSpain. Kwaye, kunye nolwazi oluthe ngqo, kule nyanga ka-Agasti intengiso inyukile kuwo omabini amacandelo. Kwelinye icala sinee-electrics ezinyulu. Oku kufezekisile ukonyuka kwentengiso nge-182,9% xa kuthelekiswa nexesha elifanayo ngo-2016. Oku kuguqulela kwiiyunithi ezili-133 ezithengisiweyo.
Okwangoku, kwimeko ye-plug-in hybrids, izinto ziye zabonakala ngakumbi. Nge-Agasti ka-2016 kuphela iiyunithi ezingama-47 ezithengisiweyo. Ngeli xesha lika-Agasti 2017 le nto inyukile yaya kwiiyunithi ezili-147. Oko kuthetha ukuba ukwanda kwe-308,9% kuqatshelwe.
Okokugqibela, kwaye njengoko sinokubona kwi-portal Ukuhamba kombaneE-Spain ngeenyanga ebesiku-2017, iimodeli ezithandwayo zezi mpawu kuluntu zezi: Renault ZOE, Nissan LEAF, Mitsubishi Outlander PHEV kunye neBMW i3.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-Movea yenza ukuthengiswa kwe-plug-in ye-hybrid cars skyrocket 300%
Ungathini ukuba ungatshaya uthotho lweeNetflix ozithandayo?
I-oda ye-Sushi ekwi-Intanethi e-Iceland ihanjiswa ngemizuzu emi-4 ngedrone